သင့်ကိုစဉ်းစားစေမည့် Snoopy စာပိုဒ်တိုများ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
သင့်ကိုစဉ်းစားစေမည့် Snoopy စာပိုဒ်တိုများ
Charles Monroe Schulz (၁၉၃၂ - ၂၀၀၀) သည် Snoopy ၏ဖခင်ဖြစ်သည်။ သူကသူ့အဖေလို့ပြောကြတယ်။ သူကကာတွန်းသမားဖြစ်ပြီးသူကကာတွန်းနောက်ကွယ်ကဖန်တီးခဲ့တာပါ။ သူသည်သမိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးကာတွန်းပညာရှင်တစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးအခြားပန်းချီကားများ၏မိဘများလည်းဖြစ်သည်။ သူဟာကလေးဘဝကတည်းကဆွဲယူခဲ့တယ်၊ ကလေးဘဝကတည်းကသူလက်ဆောင်ရခဲ့တယ်။
သူဆွဲယူခဲ့တဲ့ပထမဆုံးသူကတော့သူ့ခွေး Spike ပါ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းစစ်တပ်တွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက် Art Instruction Inc တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကာတွန်းဆရာတစ်ယောက်အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်သူသည်ကမ္ဘာကြီးကိုကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိကြောင်းနှင့်ခုန်ပျံချင်သည်ကိုသိခဲ့သည်။ ကာတွန်းသမားတစ် ဦး အနေဖြင့်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုမှာသူငယ်ငယ်တုန်းက ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သော်လည်း“ မြေပဲ” သည်ကာတွန်းစာသားဖြင့်ကျော်ကြားခဲ့သည်။
"မြေပဲ" ဆိုတာဘာလဲ။ Snoopy, Charlie Brown သို့မဟုတ် Carlitos တို့မှလွဲ၍ အခြားအရာမရှိပါ။ ဒီရုပ်ပြဇာတ်လမ်းထဲမှာသူကသူ့အကျော်ကြားဆုံးကာတွန်းဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Snoopy နဲ့ Charlie တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဒီကာတွန်းကိုအနှစ် ၅၀ နဲ့ဒီနေ့အထိပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်အစဉ်အဆက်အကျော်ကြားဆုံးရုပ်ပြဇာတ်လမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာဒီရုပ်ပြဇာတ်လမ်းဟာနှစ် ၅၀ လောက်ရယ်စရာရယ်စရာတစ်ခုထက်အများကြီးပိုတယ်လို့မင်းတို့ကိုပြချင်တယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ခုခုအဘို့ဤမျှကာလပတ်လုံးကြာလျှင်! သူ့မှာလူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဟာသရှိတယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်းလည်းချန်မထားဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေ၊ ဤသဘောမျိုးဖြင့် Snoopy နှင့်သူ၏သူငယ်ချင်းများလိုပဲသင့်စိတ်ထဲတွင်ကွဲပြားသောအတွေးအခေါ်ကိုသင်၏စိတ်ထဲမှတ်သားရန်အောက်ပါစကားစုများကိုကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည်။
ဂိမ်းကိုဝင်ခွင့်ဖြင့်ဘဝကိုစီစဉ်ရမည်။ " ဘေ့စ်ဘောကဲ့သို့ဘ ၀ ကိုကြိုတင်စီစဉ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရသောအခြေအနေတစ်ခုစီနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရန်မဟာဗျူဟာများရှိသည်။
ဆက်ကြည့်ပါ ဦး …ဘဝရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်။
လူတစ် ဦး သည်နောင်လာမည့်နှစ်များတွင်နောင်တရမည့်အရာများကိုသတိထားရမည်။
သူ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာသူကြိုးစားခဲ့သော်လည်းမအောင်မြင်ပါ။ ပြီးနောက်မှာသူဟာလူသားပဲ၊ ခွေးမဟုတ်ဘူး။
ငါ့ဘဝမှာရည်ရွယ်ချက်မရှိ၊ လမ်းညွှန်ချက်လည်းမရှိ၊ ရည်ရွယ်ချက်လည်းမရှိ၊ အဓိပ္ပါယ်လည်းမရှိ၊ ကျွန်တော်နားမလည်ဘူး ငါဘာလုပ်သင့်တာလဲ
တခါတရံငါညအချိန်တွင်နိုးလာပြီးကျွန်ုပ်အားအဘယ်ကြောင့်တွေးမိသနည်း။ ပြီးတော့အသံတစ်ခုက 'ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စမရှိဘူး၊ ငါမင်းရဲ့နာမည်နဲ့လာခဲ့တာ'
ပျော်ရွှင်မှုကနိုးထနေပြီးသင့်နာရီကိုကြည့်ရှုနေပြီးသင့်မှာ ၂ နာရီအိပ်နေတုန်းပဲ။
ဘ ၀ ဟာ ၁၀ မြန်နှုန်းစက်ဘီးနဲ့တူတယ်။ ကျွန်တော်တို့ထဲကတချို့ကအမြန်နှုန်းအားလုံးကိုမသုံးကြဘူး။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏သွားကိုဆန့ ်၍ စစ်မှန်သောစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားမှုကိုပြပါကသင်အမြဲတမ်းအခွင့်အရေးရလိမ့်မည်။
၀ ိညာဉ်ရေးသွားဆရာ ၀ န်ကဲ့သို့သောအရာရှိမရှိကျွန်ုပ်သိလိုပါသလား။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုလုံးသည်အခေါင်းပေါက်များနှင့်ပြည့်နေပါသည်။
ချစ်လှစွာသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ မင်းကိုငါဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆိုတာစကားလုံးတွေကမပြောတတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်သင်ကပိုကောင်းကိုမေ့လျော့
ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတိုင်းရုတ်တရက်သူတို့၏ပြfromနာများမှထွက်ပြေးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လျှင်ကော။ ကောင်းပြီ၊ အနည်းဆုံးငါတို့ရှိသမျှသည်တူညီသောလမ်းကြောင်းသို့ပြေးကြလိမ့်မည်!
ပထမ ဦး ဆုံးကူညီပေးတဲ့အတန်းမှာတော့ငါတစ်ယောက်ယောက်ကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်မိရင်အကောင်းဆုံးကုသမှုကချက်ချင်းပဲတောင်းပန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသိခဲ့ရတယ်။
မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှမချစ်သည်ထက်ချစ်ခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။
သိုးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ ၁၂ နှစ်ထက်ခြင်္သေ့ကဲ့သို့တစ်ရက်နေခြင်းသည် သာ၍ ကောင်း၏။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » သင့်ကိုစဉ်းစားစေမည့် Snoopy စာပိုဒ်တိုများ